ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र जोखिममा «
नेपाल बैंकर संघले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको भए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको ब्याजदर हरेक दिन बढ्दो गतिमा देखिएको छ । यसअघि बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर व्यक्तिगत निक्षेपलाई १०.५ र संस्थालाई १० प्रतिशत ब्याजदर दिने सहमति गरेकोमा व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा हटाएका हुन् । त्यसैगरी बचतमा पनि अधिकतम् ७ र न्यूनतम् ५ प्रतिशतको सहमति भने कायमै छ । बैंकर्स संघको सहमति हटेलगत्तै जनता बैंकले जनता मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी मुद्दती निक्षेप योजना सुरु ग¥यो भने पछिल्लो समयमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले १३.५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी निक्षेप योजना सञ्चालन गरेको छ । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आक्रामकरूपमा कर्जा प्रवाह गरेपछि दोस्रो त्रैमासदेखि कर्जा नियन्त्रण सुरु गरे । बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिनका लागि नयाँ निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था आयो । नयाँ निक्षेपका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो । पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा नियन्त्रण गर्दा सरकारसँग स्थानीय तहमा पठाउने बजेट बाणिज्य बैंक मार्फत पठाउन आग्रह गरे । सोही अनुरूप सरकारले पनि केही समयअघि ३८ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ बाणिज्य बैंकमा पठायो । त्यसले केही सहज भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने गर्न नसक्ने निश्चित छ । बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरले महंगी बढाउने तथा लगानी निरुत्साहित हुने निश्चित छ । सरकारी ढुकुटीमा गत असोजसम्ममा १८१ अर्ब सञ्चित छ । सरकारले कर उठाउने तर, खर्च पर्याप्त नगर्दा पनि वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर तथा कर्जा लगानीयोग्य रकममा उतारचढाव आउने गरेको हो । ब्याजदर बढेको भए पनि कर्जाको मागमा भने कमी आएको छैन । महंगो ब्याजदरमा लगेको कर्जाको लगानीले उत्पादकत्व नै महंगो बनाउँछ । बैंकहरूले पर्याप्त निक्षेप नभएको खण्डमा बचतको ब्याजदर चलाउँदैनन । बचतको ब्याजदर मुद्दतीको जसरी छोटो–छोटो समयमा घटाउने÷बढाउने पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा बैंकले दिएको ब्याजदर पनि महंगीको तुलनामा धेरै भएकाले त्यो आम्दानीले समेत बचत बढाउन मद्दत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, बैंकहरूमा बचत बढ्दैमा ब्याजदर घट्ने निश्चित भने छैन । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यक्तिगत निक्षेपको सिमा पु¥याउनका लागि व्यक्तिगत निक्षेपको भद्र सहमति हटाएको बताए पनि वित्तीय बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा भने बैंकर जिम्मेबार हुनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूमा स्रोत समस्या समाधान नभएसम्म तत्काल ब्याजदर नघट्ने बताउने बैंकर तथा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
लगानी निरुत्साहित हुने सम्भावना छ
बैकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा भद्र सहमति फिर्ता गरेको भए पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि ब्याजदर बढाएर अफर गर्ने क्रम देखिएको छ । भद्र सहमति फिर्तासँगै बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सुरु गरे । त्यसले बजारमा झनै प्रतिस्पर्धा बढायो । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतको ब्याजदरमा निक्षेप कल गरेका छन् । यसले वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर त बढायो नै । त्यसका साथै समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधिमासमेत असर गर्छ । निक्षेपमा बढ्दै गएको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर कल्पना गरेभन्दा माथि नै गइसकेको अवस्था छ । उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले लगानीसमेत निरुत्साहित हुने सम्भावना बढ्छ ।
पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याजदर बजारको महंगीभन्दा बढी हुनु राम्रो भनिए पनि उच्च ब्याजदर समग्र अर्थतन्त्रका लागि जोखिम हो । ब्याजदरको लोभमा बैंकमा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारण महंगीको समस्या पर्छन् । ब्याजदर बढाएर नयाँ निक्षेप नआए पनि पर्याप्त निक्षेप भएका बैंकहरूबाट ग्राहकले धेरै ब्याजदरका कारण अर्को बैंकमा निक्षेप राख्ने गर्छन । यसले एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा तानिने मात्र हुन्छ । सरकारी लगानी भएका बैंकहरूमा धेरै निक्षेप छ । ती बैंकका ग्राहकले नीजि क्षेत्रका धेरै ब्याजदर दिने बैंकमा निक्षेप सिफ्ट गर्छन् ।
समान्य बजारमा निक्षेपको माग बढी भए पनि ब्याजदर बढ्ने र निक्षेपको आपूर्ति बढी भएको खण्डमा घट्ने हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप आवश्यक छ । त्यसले गर्दा बैंकहरूले धेरै ब्याज दिएर भए पनि निक्षेप लिने गरेका छन् । अहिले बैंकहरूले थोरैमा १४ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ । बजारमा अहिले बढ्दो क्रममा देखिएको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर पनि निश्चयनै बढ्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव भएपछि सरकारी पैसा पनि बैंकहरूमा ल्याउने अभ्यास सुरु भयो । तर, त्यो रकम पनि धेरै सरकारी बैंकहरूमा नै गयो । केही बाणिज्य बैंकहरूमा त्यो पैसा आएकाले सहज त भएको छ । तर, सरकारले स्थानीय तहलाई छुट्याएको पैसा बैंकहरूमा आउँदा १८ अर्ब त राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा मात्र गएको छ । कुनै एउटा बैंकमा मात्र निक्षेप थुप्रियो । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप अभाव भएको बैंकमा सरकारी बैंकबाट सिफ्ट हुन सक्ने भएकाले केही सहज होला ।
बजारमा बढ्दो गतिको ब्याजदरले बैंकहरूको कस्ट पनि बढाउँछ । बैंकहरूको कस्ट बढ्दा कर्जाको लागत पनि बढ्छ । व्यवसायीले महंगोमा कर्जा लिए भने कर्जाको ब्याजदर आफ्ना उत्पादनमार्फत् सर्वसाधारणमा पास अन गर्छन । त्यसले गर्दा महंगी बढ्ने तथा आर्थिक गतिविधि नै कम हुने जोखिम बढेको छ । स्रोत अभावका कारण कर्जामा नियन्त्रण गर्दै आएका बैंकहरू पछिल्लो समयमा वढ्दो ब्याजदर कर्जाको मागलाई समेत असर गरेको छ । ब्याजदर बढ्न थाले पनि कर्जाको मागसमेत कम भएको छ । तर, बैंकहरूले दीर्घकालीन निक्षेपको अभ्यास सुरु गरेका छन् । त्यसले पनि निक्षेपको ब्याजदर भने बढाएको छ ।
सरकारलाई मात्र होइन, बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्छ
निक्षेपकर्ताबाहेकका लागि बैंकको ब्याजदर उच्च हुनु राम्रो संकेत होइन । विकास परियोजनाको कार्यान्वयनदेखि मुलुकको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यका लागि ब्याजदरमा तारन्तर हुने परिवर्तन उपयुक्त छैन । ब्याजदरमा दिगोपना कायम गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बेला बजार यसको विपरित गइरहेको छ ।
यस्तो अवस्था रहँदा पनि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यसलाई विकासको राम्रो संकेतका रूपमा अथ्र्याएका छन्, जसलाई पुष्टि गर्ने आधार छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा विकासकै आयोजनाहरू असफल हुने जोखिमका बीच मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ जस्तो ब्याजदर त्यस्तै देखिएको छ ।
ब्याजदर बढ्दा सरकारलाई मात्र होइन, बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्छ । बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि बजारमा कर्जा जाँदैन भने प्रवाह भएको कर्जा पनि चुक्ता गर्न समस्या पर्छ । एनपीए बढ्छ र दैनिक जनजीवनमा महंगीलगायतका समस्या आउन सक्छ ।
ब्याजदरमा अहिलेकै स्थितिलाई हेर्दा मुद्दतीमा १२ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । स्प्रेडदर कायम गर्न सकस पर्दा ब्याजदर १६÷१७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । कर्जा उठ्दैन । बैंकहरू समस्यामा फस्न सक्छन् । मैले अघि नै भनेँ– निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि यो वित्तीय बजारका लागि फाइदाजनक होइन ।
ब्याजदरमा बारम्बार तनाव भोग्नुको मुख्य कारण स्रोतसाधन भएको सरकारले खर्च गर्न नसक्नु हो । ब्याजदर त प्रतिस्पर्धामा चल्नुपर्ने हो । निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा जुन असन्तुलन देखिएको छ, त्यसका पछाडि सरकारकै कमजोर खर्च क्षमता मुख्य कारक हो । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । तर, सरकारले खर्च क्षमता बढाउँदा ब्याजदरको समस्या स्वतः नियन्त्रित हुन सक्छ । सरकारले खर्च क्षमता बढाएर बजारको समस्या समाधान गर्न चाहिँ सकिरहेको देखिएको छैन ।
अब मौद्रिक नीतिमा मात्र निर्भर भएर यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । सरकारले ल्याउने वित्तीय नीति नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रभावकारी वित्तीय नीतिका साथ सरकारले आफू कहाँ थुप्रिएको स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्नैपर्छ ।
सरकारको गतिविधि हेर्दा ब्याजदर समस्या समाधान गर्ने र दिगो अर्थतन्त्र कायम गर्नतर्फ उदासिनता देखिन्छ । ब्याजदरमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीमा वित्तीय पहुँचप्रति दिगो विश्वसनीयतासमेत कायम नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले समयमै खर्च गर्ने, बैंकहरूले अनुशासन पालना गर्ने र वित्तीय प्रणालीतर्फ नागरिकको विश्वास कायम गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि, बैंकमा बचत गर्ने लगानीकर्ताले भने यतिखेर आफ्नो रकम कहाँ र कस्तो खातामा राख्ने भनि सोच्नुपर्छ । जस्तो कि बचतमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा अल्मलिएर बस्नुभन्दा १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाईने मुद्दती निक्षेपमा रकम जम्मा गर्नु फाइदाजनक छ । यसो गर्दैगर्दा आफ्नो आर्थिक अवस्था र दैनिक खर्चबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
समुदाय र सदस्य केन्द्रीत सहकारीलाई समस्या छैन
सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
बाणिज्य बैंकहरूबीच व्याजदरमा सिमा लगाउने विषयमा भएको भद्र सहमति भंग गरिएसँगै बजारमा बैंकहरूबीच ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । बैंकहरूले थप लगानीयोग्य पुँजी जुटाउनका लागि बढी ब्याजदरमा निक्षेप तान्न खोजेका होइनन् । उनीहरूले पुँजी निक्षेप र कर्जाको अनुपातलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र राख्न र पेनाल्टीबाट बच्नका लागि यो चलाखी गरेका हुन् । यो आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन तर बजारमा बचतको ब्याजदर बढ्यो भनेर सन्देश गएको छ ।
प्रत्येक ६÷६ महिनामा बजारमा यस्तो तरलता अभाव देखिँदै आएको छ । यो अवस्थामा कहिलेकाँही बैंकमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण सहकारीमा गयो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर, त्यो गलत आरोप हो । बैंकहरूले जस्तै अधिकांश सहकारीहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सबै प्रावधान पालना गरेका छन् । हामी पनि वित्तीय जानकारी इकाइमा नियमित रिपोर्टिङसमेत गरिरहेका छौं ।
बैंकहरूको पुँजी वृद्धिसँगै चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिका कारण बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरे । उनीहरूले बचत बृद्धि हुन्छ भन्ने आंकलनमा जुन अनुपातमा लगानी बढाए त्यो अनुपातमा निक्षेपको वृद्धि भएन । जसका कारण अहिलेको समस्या देखिएको छ । यो अवस्था अझै केही महिना रहने देखिन्छ । भारतको चुनाव र हाम्रो खुल्ला सिमाना र दुवै मुद्रा चल्ने कारण पनि नेपालबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको जस्तो समस्या सहकारी संस्थाहरूलाई छैन । सदस्य केन्द्रीत र समुदायमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई पुँजीको अभाव हुँदैन । तर, बैंकहरूले ब्याज बढाएपछि हामीलाई पनि ब्याजदर बढाउने दवाव पर्न थालेको छ । भोलि हाम्रो निक्षेप बैंकतिर जान खोज्यो भन्ने बढाउनुपर्ने नै हुन्छ । तर, अहिलेसम्म यो अवस्था आइसकेको छैन । बरु बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताको रूपमा सहकारी संस्थालाई नै राम्रो ब्याजको अफर गरिरहेका छन् । सहकारी बैंकलाई पनि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरूले १४ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले १३.७५ प्रतिशतसम्म र बाणिज्य बैंकले १३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर अफर गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले हाम्रो अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र अस्थिर रहेको भन्ने सन्देश बजारमा गएको छ । जसका कारण सुन किन्न या पुँजी विदेश पलायन हुने खतरा हुन्छ । बाणिज्य बैंकहरूले कष्ट अफ फन्ड नै १७–१८ प्रतिशत पुगेपछि यति धेरै ब्याजदरमा लिएको ऋण कहाँ लगानी गर्ने ? यति महंगो कर्जा लगानी गरेर आएको प्रतिफलबाट व्यवसायीले किस्ता तिर्न सक्छन् ? यसतर्फ सबैले विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।